ကျနော်တို့ဝဘ်ပေါ်မှာအလွန်အကောင်းဆုံးလိင်ဂိမ်းတွေနဲ့လာမယ့်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ကပိုပြီးအပြန်အလှန်လမ်းအတွက်သူတို့ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးခံစားကြိုက်နှစ်သက်သူကိုယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများအဘို့ကြီးသောညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားဆိုဒ်များဖန်တီးဖို့ဘယ်လိုငါသိ၏။ ဟုတ်တယ်၊မှန်တာကိုဖတ်ပြီးပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လိင်ဂိမ်းများရှိသည်၊ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုခွဲခြားသော်လည်းဤဂိမ်းများသည်ခွဲခြားခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသားများနှင့်ကစားသောအမျိုးသမီးဂိမ်းများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများအတွက်ဂိမ်းကစားနိုင်သည်။ ဒီဂိမ်းအတော်များများလည်းစုံတွဲများအဘို့ကြီးသောဖြစ်ကြသည်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆိုဒ္မွာရွိတဲ႔ စိတ္နဲ႔ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြဟာပါရမီရွင္ေတြနဲ႔ မျခားနားဘူးလို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။, သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အခ်စ္ေရးကေတာ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္နားလည္မႈရွိရွိနဲ႔ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႔ျဖတ္သန္းၾကဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တဖန်သင်တို့အင်တာနက်အခမဲ့ပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်သောအများဆုံးအပြန်အလှန်နှင့်စွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံများတဦးပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဤဂိမ်းအချို့ပင်ပို. ဤဆိုဒ္တြင္ေတြ႕ရေသာအရာအားလံုးသည္ေအာ္ပေရးရွင္းတြင္ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သင်မသိသောကိစ္စတွင်ခုနှစ်,မီလီလီတာ5 ဘရောက်ဇာများအတွက်ဗီဒီယိုဂိမ်းဒီဇိုင်း၏ညာဘက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. သင်ဤဂိမ်းကစားနေသည့်အခါတိုးချဲ့သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်မဆိုကြင်နာမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့သည်လည်းဤဆိုဒ်ပေါ်တွင်ရတဲ့ကြသောအခါမှတ်ပုံတင်ပုံစံမဆိုကြင်နာမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့မဆိုလမ်းအတွက်သင်၏နာမသို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာဘို့သင့်ကိုမေးဘယ်တော့မှနှင့်သင်ပင်ဤဂိမ်းကြည့်ရှုနေစဉ်သင့်ရဲ့အိုင်ပီထိတွေ့ရှိသည်မဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဂိမ်းများအပြင်,ငါတို့သည်လည်းမှတ်ချက်အပိုင်းများနှင့်သင်ဒီမှာအားလုံးသင့်ရဲ့ညစ်ညမ်းအချိန်ရွှေ့ဖို့အပိုအကြောင်းပြချက်ပေးလိမ့်မည်ဟုဆိုက်အပေါ်တစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုဘုတ်အဖွဲ့ရှိသည်။ သင်ဒီမှာမိတ်ဆွေများကိုလုပ်သူတို့နှင့်အတူစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတွေ့အကြုံများအမျိုးမျိုးတို့ကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။
သငျသညျဝဘ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ရှိသည်နိုင်သည့်မှတဆင့်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကျော်ထိုကဲ့သို့သောထိန်းချုပ်မှုပူဇော်လိမ့်မည်ဟုသင်တို့ကိုအာမခံကြကုန်အံ့။ ပင်မစရိုက်မော်ဒယ်များသင်ဤခံစားချက်ကိုငါပေးမည်။ ရှုပ်ထွေးသောဂိမ်းမှတပါး,ဤဂိမ်းလည်းသင်သည်သင်၏လိင်မိတ်ဖက်ရှာဖွေနေကြသည်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်အောင်သင်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာဆောင်ခဲ့နေကြသည်။
လူတို႔သည္မိမိတို႔၏ဆိုဒ္တြင္ကစားေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရေသာအခါမိမိတို႔၏အသက္အ႐ြယ္ကိုေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ သူတို့တွေဟာငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှာသူတို့ရဲ့ကျိန်းဝပ်ရာနေရာကိုကောင်းကောင်းရောက်သွားတတ်တာကိုကြိုက်ကြပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်,မင်းသမီးပိုပြီးရင့်ကျက်ယောက်ျားသို့ဖြစ်ကြသည်။ သကြားဖေဖေအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဂိမ်းတွေတောင်ရှိသေးပြီးယောက်ျားတွေကမိန်းမလျာဇာတ်ရုပ်တွေထက်ငယ်တဲ့အချိန်တွေမှာသာကွက်တိဖြစ်နေတာပါ။
အခါအခြင့္သင့္ရင္ေျပာျပပါ့မယ္။ သူတို့ကအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းဂိမ်းများ,ခကျြခကျြမြားနှငျ့သူတို့စိတ်ထဲကျေးကျွန်သို့မိန်းကလေးများလှည့်သည့်အတွက်ပင်အချို့သောစိတ်ကိုထိန်းချုပ်မှုဂိမ်းကြိုက်တယ်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်,မိန်းကလေးများဆိုက်ပေါ်တွင်အများဆုံးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်အမာခံဂိမ်းကစားနေကြသည်။ သူတို႔ဟာသားေကာင္ရဲ႕႐ႈေထာင့္ကေနကစားၿပီးသူတို႔ရဲ႕ တြန္းအားေတြ၊သူတို႔ရဲ႕ တြန္းအားေတြ၊သူတို႔ရဲ႕ တြန္းအားေတြ၊သူတို႔ရဲ႕ တြန္းအားေတြအားလံုးကိုျဖတ္သန္းသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီဆိုက္ရဲ႕ အလွအပကေတာ့အသံုးျပဳႏိုင္မႈပါပဲ။ သငျသညျကစားစတင်မီဘာမှလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ရုံရိုက်ထည့်ပါနှင့်ပျော်မွေ့။ ဒါဟာသင်တစ်ဦးညစ်ညမ်းပြွန်ပေါ်ရသောအရာကိုကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်ဗီဒီယိုကြော်ငြာများမှတဆင့်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ပင်ရိုးရှင်းတဲ့။ အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာတွေဆိုက်ပေါ်တွင်သင်နှောင့်ယှက်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့သည်သင်၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအတွေ့အကြုံကိုခံစားသင်၏လမ်း၌ရဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရှိသည်သောနဖူးစည်းစာတမ်းတွေ၏စုံတွဲကောင်းစွာထားရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ဤစုဆောင်းမှုတွင်ဂိမ်းအသစ်များကိုယူဆောင်လာသည်။, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့လည်းသင်ဂိမ်းကစား၏အဖြစ်အမည်ဝှက်အဖြစ်အခြားသူများနှင့်စကားပြောခန်းနိုင်ပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာချက်တင်အခန်းသစ်တစ်မျိုးအပေါ်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပါရှိပါသည်နှငျ့သငျကြှနျုပျတို့ပွုသောအရာလက်လွတ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။